Wasiirka caddaaladda USA Eric Holder oo Iswiidhen booqasho ku yimid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka Caddaaladda Maraykanka Eric Holder oo baarlamaanka Iswiidhen khudbad ka jeedinaya. Sawirle:TT
Wasiirka caddaaladda USA Eric Holder oo Iswiidhen booqasho ku yimid
La daabacay onsdag 5 februari 2014 kl 15.31
Eric Holder ayaa noqonaya wasiirkii caddaaladda Maraykanka oo ugu horreeyey oo booqasho ku yimaada Iswiidhen. Wasiirkaan Maraykanka ayaa talaadadii shalay khudbad qaadatay 40 daqiiqo ka jeediyey baarlamaanka Iswiidhen. Wuxuu khudbaddiisa ammaan ugu soo jeediyey Iswiidhen iyo dhaqdhaqaaqyadii xuquuqda muwaadiniinta iyo sida xooggan oo ay Iswiidhen ugu doodo xuquuqda dadka HBTQ ah. Wuxuu kaloo wasiirku tilmaamey in Iswiidhen ay tahay dalkii toddobaad ee dunida ka oggolaada in dadka khaniisiinta isguursan karaan.
- Iswiidhen iyo Maraykanku waxay ka siman yihiin qiimeynta iyo xil iska saaridda aayaha aadanaha.
Khudbaddaas uu jeediyey iyo kulan uu la yeeshay wasiiradda caddaaladda Iswiidhen Beatrice Ask ka sokow, waxay ahayd booqashada mid qarsoodi ah oo xatta uusan la kulmin saxaafadda.
Wasiiradda caddaaladda Iswiidhen ayaa kulan saacad qaatey la yeelatay wasiirka caddaaladda Maraykanka. Kulankaas kadib waxay sheegay in ay ka wadahadleen arrimo ay mid ahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo sirdoonka signaalada. Horay ayaa su’aal looga keenay Hay’adda sirdoonka Iswiidhen ee loo yaqaan FRA oo lagu eedeeyey in ay si jajaban uga hay’adda sirdoonka Maraykanka ee NSA arrimo la xiriira sirdoonk. Laakiin waxay Beatrice Ask idaacadda Studio Ett u sheegtay in aysan taasi waxba ka beddelin xiriirka ka dhexeeya Iswiidhen iyo Maraykanka:
- Maya oo uma arko in uu taas ka welwelsanaa oo waxba iima sheegin. Waxaan isla garannay in ay wadashaqayn wanaagsani naga dhexeyso. Waxaa intaas dheer in aan iska la sheegay arrimo xagga sancada sida Internet iyo horumarinta IT oo xawli ku socda. Sidaas awgeed ayey lagama maarmaan u tahay in aan ka wadaxaajoonno sidii wadashaqayntaasi noqon lahayd iyo xeerarka la raacaayo.
Ma la oran karaa wadashaqayntani waa mid sida kuwii hore u wanaagsan?
- Haa, oo rajaan ka qabaa. Marka hore waxaan rajeynayaa in aan waxyaalaha qaarkood isla lafagurno.
Beatrice Ask waxay intaas ku dartay in aysan iyada iyo Eric Holder isla soo qaadin wax ku saabsan Julian Assange.
Wasiirka caddaaladda Maraykanka Eric Holder ayaa maanta u sii duulayaa dalka Booland.
Isha: SVT/Studio Ett